Pace Pictures နှင့် ShockBox VFX Forge Alliance | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများနှင့် ShockBox VFX Forge ရဲ့တစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့
ShockBox Co-တည်ထောင်သူ: အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဒန်ယဲလ် Addair, ဒါရိုက်တာစတီဗင် Addair နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူပတေရုသအမ်စိမ်းလန်း။
အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများနှင့် ShockBox VFX Forge ရဲ့တစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့
F ull ဝန်ဆောင်မှု post ကိုဆေးရုံနဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအိမ်သူအိမ်သားရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် virtual reality ပြီးများအတွက် turnkey န်ဆောင်မှုပေးမယ့်နှစ်ရှည်လများဖန်တီးမှုမိတ်ဖက်တရားဝင်။
ဟောလိဝုဒ်-Pace ရုပ်ပုံများ, အခြေစိုက် full-service ကိုအသံနဲ့ရုပျပုံ Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ဟောလိဝုဒ်နှင့် ShockBox VFX, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက် bi-ကမ်းရိုးတန်းအထူးကု, ကာတွန်းနှင့်ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်အထူးကုကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ကျ-ထိရောက်စွာ, ထိထိရောက်ရောက်မဆိုစီမံကိန်းကိုပြီးစီးရန်အလို့ငှာ၌၎င်း, သာ. ကြီးမြတ်ဖန်တီးမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပို့စ်အားလုံးရှုထောင့်လွှမ်းခြုံ, ဘက်ပေါင်းစုံန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုပေး။
အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများသမ္မတ Heath ရိုင်ယန်
အဆိုပါသဘောတူညီချက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြစ်ပေါ်နေသောထားပြီးတဲ့အောင်မြင်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမိတ်ဖက် formalizes ။ အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများနှင့် ShockBox လွတ်လပ်သောအင်္ဂါရပ်အပေါ် 2015 အတွက်အလွတ်သဘောပူးပေါင်း နိုဝင်ဘာလနည်းဥပဒေ။ ထိုအချိန်မှစ. သူတို့အများစုမကြာသေးမီကသည် Hulu စီးရီးအပါအဝင်မြောက်မြားစွာစီမံကိန်းများပေါ်တက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, Lionsgate ရဲ့ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ မှစ.3နှင့် Universal Pictures ရုပ်ရှင် '' ဂရန်း-Daddy နေ့စောင့်ရှောက်မှု နှင့် လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ကညီအစ်ကို2။ အရှိန်အဟုန်ဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့, အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီးအသံရောစပ်အပါအဝင်န်ဆောင်မှုများပေးခဲ့ကြသည်။ ShockBox အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, ကာတွန်းနှင့်အဓိကခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကအနီးကပ်အလုပ်လုပ်အဆင်ပြေတီထွင်ခဲ့ကြ complimentary န်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများပူဇော်," ခြေလှမ်းရုပ်ပုံများသမ္မတ Heath ရိုင်ယန်ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလိုရှိ၏။ တစ်ဦးကတရားဝင်မဟာမိတ်နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအကျိုးပြု။ "
"ကျုံ့ဘတ်ဂျက်နှင့်ဖြန့်ဝေအချိန်ဇယား၏ယနေ့ကမ္ဘာမှာခုနှစ်, စာတိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက်အချိန်ကိုမကြာခဏခံရနိုင်ပါတယ်" လို့ ShockBox တည်ထောင်သူနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးစတီဗင် Addair ကထပ်ပြောသည်။ "ခြေလှမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်အားဖြင့်အားလုံးအရွယ်အစား၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စတူဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျကြှနျုပျတို့၏ဘက်ပေါင်းစုံ VFX ပိုက်လိုင်းတိုးမြှင့်ဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ "
သဘောတူညီချက်၏တစိတ်တဒေသအဖြစ်, ShockBox ခြေလှမ်းနောက်ပိုင်းမှာဒီကဆြုံးဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ All-အသစ်ကစက်ရုံရန်၎င်း၏အနောက်ကမ်းခြေစစ်ဆင်ရေးရွှေ့မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလည်းခြေလှမ်းရုပ်ပုံများအကြားစာဝှက်ထားတဲ့, မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာဆက်သွယ်မှုတက်ထားပြီ, ဟောလိဝုဒ်နှင့် ShockBox, နယူးယောက်, သူတို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံစီမံကိန်းကို data တွေကိုဖလှယ်ဖို့ခွင့်ပြု။ "ကျနော်တို့အလုပ်ချောမွေ့စွာမျှဝေသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလုပ်ငန်းအသွားအလာထူထောင်ပါတယ်," ShockBox အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူပတေရုသအမ်အစိမ်းရောင်ကဤသို့။ "ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးအများအပြားစွမ်းရည်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတွေကိုကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျယ်ပြန်အရင်းအမြစ်များကိုအပြင်ကျနော်တို့အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုစည်းစိမ်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် '' ပူးတွဲအလုပ်စတိုင်များနှင့်နယ်ပယ်တစ်ခုအကွာအဝေးဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်များအတွက် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ မှစ. 3ShockBox 500 အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရိုက်ချက်များထက်ပိုမိုဖန်တီးနေစဉ်ခြေလှမ်းရုပ်ပုံများ, အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီး, နောက်ဆုံးအရောင်အဆင့်နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘို့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, ShockBox ဒီဇိုင်းနှင့်စီးရီးကိုထုတ်လုပ်ဆောင်ပုဒ်သီချင်း '' သစ်ကိုဖွင့်လှစ်ခေါင်းစဉ် sequence ကို (ထိုစီးရီးသစ်တစ်ခုတစ်အုပ်ဖြစ်ဟုသတ်မှတ် '' ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းများ Be ဖို့အသုံးပြု ခြေလှမ်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ post ကိုင်တွယ်နှင့်အတူ Chrissie Hynde ဖြင့်ဖြစ်စေ) သီဆို။ နှစ်ခု Universal Pictures features တွေအဘို့, ဂရန်း-Daddy နေ့စောင့်ရှောက်မှု နှင့် လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ကညီအစ်ကို 2, ခြေလှမ်းရုပ်ပုံများဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့, အရောင်အဆင့်နှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီးန်ဆောင်မှုပေးအပ်; ShockBox ဝါးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခဲ့သည်။
2005 အတွက်ရိုင်ယန်တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ခြေလှမ်းရုပ်ပုံများတစ်ဦးချင်းရရှိနိုင်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီး, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, TITLE, အသံဒီဇိုင်း, အသံရောစပ်, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများ, ကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ် turnkey ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကလာမည့် Lionsgate လွှတ်ပေးရန်သံကိုရောစပ်န်ဆောင်မှုများပေး တစ်ဝက်တစ်ပျက် နှင့် 20 များအတွက်န်ဆောင်မှု postth Century Fox ရဲ့ ကြော်ငြာ Astra ။
ShockBox, စတီဗင်နှင့်ဒန်ယဲလ် Addair, ပတေရုအမ်အစိမ်းရောင်နဲ့ James ခန်းမကဦးဆောင်နှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိထုတ်လုပ်မှုရုံးများထိန်းသိမ်းထားသည် 2015 တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Los Angeles မြို့။ အပိုဆောင်းခရက်ဒစ် Netflix ရဲ့ပါဝင်သည် အစီအမံ, Fox ကနှင့် WWE Studios က '' စန်တာရဲ့ Little ကကူညီ နှင့် Viacom / BET ရဲ့ အဆိုပါ Quad ။ ၎င်း၏ client များ Saban, တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်, Pepsi, Philips ကအီလက်ထရောနစ်, Cirque du Soleil နှင့်များစွာသောပိုပြီးပါဝင်သည်။
အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများစက်ရုံပြီးသွား full-service ကိုအသံနဲ့ရုပျပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းရရှိနိုင်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီး, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, TITLE, အသံဒီဇိုင်း, အသံရောစပ်, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ပို့စ်န်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေး, ကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ် turnkey ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းကိုအသည်းအသန်နေသောအလွန်အမင်း-ကျွမ်းကျင်အနုပညာရှင်များနှင့်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, နှင့် virtual reality ထိုသို့ဖွစျစနေိုကိုအကောင်းဆုံးသောစီမံကိန်းကိုအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထား။
ShockBox, ShoulderHill Entertainment က, LLC ၏ဌာနခွဲ။ , အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်, 2D နှင့် 3D ကာတွန်းအဖြစ်အဓိကခေါင်းစဉ်များ, ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ high-end ကော်ပိုရိတ်ဇာတ်ကားအဘို့အဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အယူအဆဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။ အဆိုပါ ShockBox အဖွဲ့သည်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, VFX, ကြော်ငြာ, PR စနစ်, branded အကြောင်းအရာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ထုတ်လွှင့်, ဂီတနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတှေ့အကွုံရှိပါတယ်။
မကြာသေးမှီကခရက်ဒစ်ဟာ Lionsgate / ရော့ဖုတ်ကောင်ဇာတ်ကားပါဝင်သည် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ မှစ.3နှင့် 31, မရဏာနိုင်ငံနှင့်အ Back ကိုမှ (ကနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများ၏ချမှတ်ခြင်းကိုကြည့် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ မှစ. 3), National Geographic ရဲ့ Reality ၏ 24 နာရီ: ကာကွယ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ Planet ကိုNetflix ဟာရဲ့ အစီအမံ, Universal ရဲ့ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ကညီအစ်ကို 2, ဂရန်း-Daddy နေ့စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ပိုကြီး Fatter Liar, WWE Entertainment ရဲ့ စန်တာရဲ့ Little ကကူညီ, BET ရဲ့ အဆိုပါ Quad နှင့်အရသာယူနစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာလနည်းဥပဒေ.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality Visual Effects 2019-09-24
ယခင်: မာရှယ် POV ကင်မရာများကို '' Player ကို Cam '' ဖြင့် Next ကိုအဆင့်မှအီလက်ထရောနစ်အားကစားထုတ်လွှင့်ကိုယူ
နောက်တစ်ခု: Encore ဗန်ကူးဗားမှလှို Colorist ဂျင်မီ Hsu